travel Blog from nepal ,nepali blogger, nepal trekking blog, himalayan blog, kathamndu , pokhara chitwan blog,blogging in nepal,
Basic Index : The Recent Articles
समाज ,संस्कार र सन्तान
Feb 27, 2017	0 Comments
जम्मा ३ महिनाको उमेरको नानीलाई नजिकै आइरहेको सरस्वती पूजामा कान छेड्न स्नातकोत्तर अन्तिम वर्षमा पढ्दै गरेकी मेरी एक आफन्तले दिएको सुझाव मलाई व्यवहारिक लाग्दै लागेन । उनको पुरानो तर्क थियो, कान छेड्नाले शिक्षाको मुहान फुट्छ, साना मुन्द्रा, टप आदि गरगहना पहिरिदा छोरीको शारिरीक सौन्दर्य बढ्छ, संस्कार धानिन्छ । समाजमा घुलित भइन्छ । उनको तर्क एक प्रकारले सोच्दा राम्रै होला तर १ वर्ष पनि नपुगेकी सानी छोरीका कोमल कानका लोती फोडेर अनावश्यक मुन्द्रा र टप लगाइदिएर मलाई संस्कृति धान्ने, सामाजिक हुने, छोरीको सौन्दर्य बढाउने कुरा पटक्कै मन परेन । तर्क वितर्क बढ्दै गयो । हो मलाई विवाह पछि सन्तानको रहर पलायो, जुन अक्सर सबै दम्पतीमा पलाउछ । श्रीमतीसंग सबै खाले सहकार्य पछि यो सबै सम्भव भयो र छोरी यस धर्तीमा आइन । मेरो रहरले मैले सन्तान जन्माए भन्दैमा मलाई मेरो नानी माथी मेरा अरु ईच्छा र रहर लाद्ने र पूर्ति गराउने अधिकार छ र ? सदियौं वर्षदेखि चलेका चलन भन्दैमा के मैले छोरीको मनोविज्ञान नै नबुझी यो यति कम उमेरमै किन उसको कान छेडौं ? मलाई लाग्छ, भोली छोरीले आफै समाजको यो बृहत शब्दकोष पढ्नेछिन् अनि उसलाई ठिक र बेठिक लागेका सबै कुरा उसले उसकै मर्जिमा गर्नुपर्दछ । म उसको इच्छा विपरित र सिफारिस विना कान, नाक छेडेर बाल अधिकार हनन गर्न सक्दिन । जन्म दिए“, अभिभावक हु तर त्यो भन्दैमा मैले उसको इच्छा विपरित संस्कृतिलाई धान्ने नाममा यस्ता सबैखाले कुरिती र संस्कार पछ्याउन आवश्यक छैन । यो मेरो बुझाइ हो । म सांस्कृतिक तक्माहरु अनावश्यक पहि¥याउन हुदैन भन्छु । छोरी बारे मेरो यो धारणा छ कि सबै कुरा उसले बुझोस र लियोस । मातृवादी लेखिका Simon de Beavoir उनको the second gender मा भन्छिन– one is not bornawoman, rather one becomes one"म चाहन्छु मेरी छोरीलाई लैङ्गिक विभेदको खाल्डोमा नफसाइयोस् । उसको अस्तित्व जन्मदेखि अनन्त कालसम्म नडगमगाओस् । समाजले ऊ मिसिन भन्दा अघि नै बनाएका जन्जिर र ढाटहरुले उसको यात्रामा बाधा नपु¥याउन उसले यी सबै जाललाई समाल्न सकोस् । ऊ स्वतन्त्र चरी झै होस् । मन लागेको ठाउमा उडान भर्न पाओस । समयले उसलाई नाइटिङ्गेल बनाओस, मेनका बनाओस, वा बेली नाच नाच्ने नर्तकी बनाओस, नाक कान छेडेर एउटा अधिनायकवादी पालकले तान्ने उसको पशुजस्तो भविष्य नबनोस । म आजैबाट उसको सुन्दर भोलिको जग हाल्दैछु तर मेरा आफन्त कहिलेकाही मलाई उनीहरुको अर्ति बाड्छन् जो मलाई पाच्य छैन । अस्ति भर्खर छोरीको जन्म हुन केही दिन अघिसम्म ग्राण्डी हस्पिटलमा श्रीमतीको पाठेघरको अन्तिम अल्ट्रासाउण्ड सकेर डाक्टर शर्माले मेरी श्रीमती र मलाई संयुक्त बधाई दिए । हामी हाम्रो सन्तानको नजिकिदो धर्तियात्रा सम्झेर खुशी भयौं । हामीले साधारणतया १८–२० हप्तामा गरिने पहिलो अल्ट्रासाउण्डमा थाहा हुने बच्चाको लिङ्गबारे केही सोधेनौं । हामीलाई पु र स्त्री कुन लिङ्ग हो भनेर कहिले पनि सोध्ने आवश्यकता परेन । किनकी हामी कुनै Specific लिङ्ग भन्दा पनि यो अनौठो जिन्दगीको महा अनौठो खेलमा भगवानको यथोचित साथले दङ्ग थियौं । सायद डा. आभा र उनको टिमलाई हामीलाई हाम्रो सन्तानको लिङ्गको कौतुहलता र भोक नजागेकोमा खुशी लाग्यो होला ......। मलाई डाक्टर, भगवान र पैसा एक त्रिशुलका ३ चोसाझै लाग्छ । पैसा तिरेपछि डाक्टरले बच्चाको लिङ्ग बारे भन्न सक्छ तर पैसा तिरेर भगवानलाई लिङ्ग निर्धारणमा कर गर्न सकिन्न । प्रसबको अन्तिम बेदना सम्म मेरी श्रीमतीले कुनै लिङ्ग विशेषको जन्म दिदैछु भन्ने उनलाई थाहा नहोस ताकी यो अनविज्ञताले उनलाई अझ बढी शक्ति मिलोस भन्ने मेरो सदैव चाहना हुन्थ्यो । हरेक व्यक्तिले सृष्टिको महत्व बुझ्नुपर्दछ तब मात्र जिवन सार्थक हुन्छ । भगवानले हरेक बच्चालाई भविष्यमा बाबु र आमामा रुपमान्तरण गर्छन्, एउटा बिज बोट बनेर उसले आफ्नो धर्म पुरा गर्दछ । यो जिवनको कठोर परीक्ष्ाँ हो । हिमालबाट बगेको खहरे सागर सम्म पुग्छ अनेक जाघर पार गरेर, जिवन त्यस्तै हो । आजको आफ्नो सन्तानले हिजोको आफूको याद दिलाएर जान्छ । बच्चाहरुले आमाको गर्भमा आफ्नै मुटुले स्वास फेर्दा उत्पन्न हुने बाडुली, अनि फुटबल मैदानमा फ्रिकिक हाने झै हान्दा उत्पन्न हुने कम्प र स्तनपान गराउदा आमाको नसा नसामा नाच्ने खुशीयाली पुरुषले प्रत्यक्ष्ँ अनुभव गर्न नपाए पनि त्यो दुवैमा साझा सम्पत्ती हुन् । यसमा दुविदा नै छैन । समय र साथले यी सबै कुराको अनुभव दिलाउछ । नाक कान छेड्ने त सामान्य बहसका कुरा न हुन् । यो भन्दा अरु धेरै कुराहरु जन्मसंगै आउदछन् । हामीले जन्म संगै सन्तानसंग अनगिन्ती आशा र सपनाहरु बुनेका हुन्छौं , मलाई अभिभावकले जन्म दियौं, हुर्कायौ, बढायौं, खुशी, सुरक्षा दियौं भनेर अप्रत्यक्ष्ँ सावा र व्याज माग्नु त्यति न्यायोचित लाग्दैन, सन्तान भनेका Salary man पटक्कै होइनन् जसले लगानीकर्तालाई तुरुन्त नाफा दियोस वा फाइनान्समा डिपोजिट गरेको क्यास जसले महिना महिना इन्ट्रेस्ट दिन्छ । सन्तान र बाबुआमा विच आध्यात्मिक बुझाई हुनुपर्दछ । ओशोले एउटा पुस्तकमा भनेका छन् – अभिभावकले आफ्नो सन्तानले आफुले पुरा गर्न नसकेको काम पुरा गरोस भन्ने आकांक्षा राख्दछन् । यो आफैमा विरोधाभासयुक्त छ । हामी पुरा नभएका आफ्ना सपना पुरा गर्न सन्तानलाई खेतला बनाइरहेका छौं । ओशो भन्छन् ः रुख चढ्न लागेको बच्चालाई तल नतान माथी पु¥याउन सहयोग गर । के हामीले हाम्रँ बच्चाहरुलाई यो वातावरण दिएका छौं ? मेरी एकजना साथी छिन्, श्रीमान अरबमा काम गर्छन र उनी काठमाडौंमा सानो तिनो काम गरेर छोरालाई काठमाडौंको महंगो बोर्डिङ्गमा पढाइरहेका छन् । पछिल्लो समय उनले मलाई छोराले पढाइमा मिहिनेत नगरेको, आफ्नो सबै भौतिक मानसिक आर्थिक लगानी डुब्न लागेको र आफू साह्रै तनावमा गुज्रिएको बताइन् । मलाई लाग्यो उनले बेलैमा छोरालाई राम्रो Counseling गर्न सकिनन् वा गर्ने क्षमता उनमा भएन । परिवारको मुख्य पुरुष पैसा कमाउन बाहिर बस्न विवस छ । गफकै क्रममा उनले S.L.C. पछि छोरालाई इन्जिनियर, डाक्टर नै बनाउन आफूले चाहेको बताइन् । मलाई लाग्यो हाम्रो अभिभावकमा किन बच्चालाई एउटा राम्रो राजनितिज्ञ, लेखक, साहित्यकार, अनुवादक आदि होस भन्ने चाहना बन्दैन ? यो त एउटा उदाहरण मात्र हो,, आजकल कुन देश, कुन शिक्षा भनेर हामी नराम्रो प्रतिपर्धामा फसेका छौं । हाम्रो अर्गानिक पद्धति बच्चाहरुलाई यहा जबरजस्ती खुवाइरहेका छौं, घोकाइरहेका छौं । उनीहरुको मनोविज्ञान कमै बुझिएको छ । यसले भोलिको समाजमा गम्भीर असर पार्न सक्छ । जबरजस्ती अग्लिने बास र उत्तिस रोपिरहेका छौं आज हामी समाजका चौतारीमा ...................... । एउटा प्रसंग जोड्न मन लाग्यो । एक दिन दुईजना पर्यटकको गाइड बनेर बसन्तपुर कुमारीघर छिरे । विदेशीलाई माथी वार्दलीबाट सानो कुमारी झ्यालबाट कुमारीले दर्शन दिइन् तलबाट उनीहरुले जिवित देवी कुमारीलाई नियाले । मलाई एउटी सानी वर्ष झण्डै ७–८ की एक अवोध बालिकालाई समाजले संस्कृतिको नाममा अनेक लुगा पहिराएर जिवित देवीको नाम दिएर उनका परिवार साथीभाई विद्यालय, उनको आफ्नै संसारबाट तानेर एउटा सामन्तको प्रतिक दरवारको कुनामा लडाइरहेको जिउदो लास जस्तो लाग्यो । म केही नेपाली आगन्तुक जो कुमारीलाई केही नगद र फलफुल चढाएर ढोग गरिरहेको लाइनमा पुगे कुमारी दर्शनको खातिर । मैले फुल पनि चढाइन, न त दाम फाले कुमारीको साना पाउमा, उनको आखामा आई कन्ट्याक्ट गरेर उनको भाव अध्ययन गरे । कुमारी मेरो लागि औसत बालबालिका भन्दा कमजोर, लजालु, बोधो, असान्त लाग्यो । उनको भित्री भावले मलाई भने जस्तो लाग्यो– हे दाई, अंकल मलाई यो ठाउमा बस्न मन छैन, मेरो जन्मघर साथीभाई समिप लैदेउ, मलाई मेरो बालसखीहरुसंग खेल्न मन छ, मलाई मेरो अभिभावकसंग बस्न मन छ, उनीहरुको काखमा सुत्न मन छ । मलाई यो जेलबाट मुक्त गर, विन्ती छ मलाई कुमारीको रुपमा कुनै महाराजले तात्कालिन समयमा चलाएका कुप्रथाबाट विदा देऊ आदि आदि, मलाई लाग्यो देशकै विद्धानहरु बस्ने यो सहरमा एक नारीलाई यो संस्कारको साङ्लोले कहिलेसम्म बाधिरहने ? अरु कति अवोध बालिकालाई जिवित कुमारी भन्दै उनीहरुको स्वतन्त्रता लुट्ने ? ढलेका दरवारबाट अब सुगा उडाइदिउ नया व्यवस्थामा अव यो सुहाउदैन । अनि पहिला कुमारी प्रथा हटाऔं अनि देउकी उन्मुलन गरौला । मेरो प्रश्न र मनमा लागेको कुरा यो हो की के शिव शर्माले ७ वर्षकी गोमा ब्राह्मणी लगे भन्दैमा अझै हामीले त्यसलाई मान्ने ? के सन्तनु राजाले आफ्ना सन्तान नदीमा बगाए भन्दै बगाउने ? के राम लक्ष्मण बनबास गए भन्दै हाम्रा सन्तानलाई बनबास पठाउने ? द्रोणलाई औला सुम्पने ? द्रौपदीलाई साझा भोग गरिरहने ? हाम्रा धर्म र कर्म यति धेरै उट्पट्याङ्गले भरिएको छ जसलाई हामीले गरेर होइन पढेर आनन्द लिन सक्छौं भुत बुझ्नलाई । बच्चाहरु प्रकाशकले बजारमा फालेका पुस्तक जस्तै हुन्, जसमा लेखकको कन्टेन्टमा कन्ट्रोल गुमिसकेको हुन्छ । त्यस्तै बच्चाहरु धर्तिमा जन्मीसकेपछि आफ्नै सम्भावना र चुनौती लिएर आएका हुन्छन् । उनीहरुलाई जन्मको नातासंग जोडेर गोडमेल गर्ने नाममा तोडमोड गर्न मिल्दैन । मलाई त यस्तो लाग्छ, तपाइहरुलाई नि ?
बाँस रहे बासुरी : सन्धर्भ पोखरा को
Oct 19, 2016	0 Comments
बाँस रहे बासुरी ( सन्धर्भ पोखरा को ) भदौको पहिलो हप्ता कामको सिलसिलामा पोखरा भ्रमणको साइत जु¥यो र त्यता लागे“ । म काठमाडौं बस्छु तर ८–१० वर्षदेखिको भ्रमण इतिहास हेर्दा वर्षमा १–२ चोटी पोखरा नियमित आऊ जाऊ गर्नेमा म पर्दछु । पोखरा बढी जानुमा मेरो काम जो पर्यटकलाई नेपाल घुम्न सहयोग गर्ने हो त्यो पनि एउटा कारण हो भने अर्को नेपाल घुम्न आउने पर्यटकको रोजाइमा पोखरा र आसपासका डा“डा र भञ्याङ्ग पर्नु पनि हो । नेपालमा प्रकृतिले संसारका अन्य भाग भन्दा अग्ला पहाडहरु दिएको छ । अग्ला १४ शिखरहरु मध्ये ८ नेपालमै पर्दछन् । अग्ला पहाड, त्यहा“का वनस्पति, भौगोलिक अवस्था, जनजीवन, संस्कृतिहरु नेपाल भ्रमण गर्ने पर्यटकको प्रमुख लक्ष्य हुन्छ । पूर्व कञ्चनजङ्गा देखि पश्चिममा अपि हिमालका हाम्रा सबै हिमाल, पहाड र तराइका भूभागहरु पर्यटकलाई लोभ्याउन सक्ने छन् । यति सानो क्षेत्रफलमा जो विविधता छ त्यो नै हामीले प्रकृतिबाट प्राप्त अमुल्य उपहार हो जसलाई हाम्रा पूर्खाले हामीलाई सुम्पिएर गए । नेपालमा प्रकृतिले असाध्यै राम्रा ठाउ“हरु उपहार दिएको भएपनि रारा, डोल्पा, मनाङ्ग, मुस्ताङ्ग पुग्न छिटो र सुरक्षित उपायहरु छैनन् । त्यसकारण पनि पोखरा नै बढी जाने आउने गरेको हुनुपर्दछ मैले । पोखरा स्वदेशी र विदेशी पर्यटकको प्रमुख रोजाइमा पर्ने कुरा हामी सबैलाई थाहा नै छ । पश्चिमाञ्चलमा पर्ने प्रसिद्ध अन्नपूर्ण राउण्ड, अन्नपूर्ण वेसक्याम्प, धौलागिरी, पुनहिल, जोमसोम, रोयल र अन्य थुप्रै पदयात्राको सुरुवात पोखराबाट नै हुन्छ । ताल, हिमाल, मठमन्दिर र देशकै दोस्रो ठूलो सहर भएर हुनुपर्दछ पोखराको उचाइ नेपालका अन्य सहरको भन्दा उचो छ । साराङकोटको डा“डामा कति नेपाली चलचित्रका सिन खिचिए, कति गीतकारले पोखराको वर्णन र विम्ब प्रयोग गरेर कति साहित्य लेखे त्यो फेवातालमा तैरिने माछापुच्छ«े जस्तै स्पष्ट छ । पोखरा प्राकृतिक रुपले यति भरिपूर्ण छ कि यसको नाम सुन्दा नै स्वदेशी र विदेशीलाई मनभित्रैबाट आनन्द उर्लेर आउ“छ । विद्यालयहरुको शैक्षिक भ्रमण देखि विदेशी संघ संस्थाका तालिम र गोष्ठी देखि नवविवाहित थुप्रै नेपालीहरुको हनिमुन गन्तव्य पनि पोखरा नै हुन्छ । विगत केही वर्षदेखि पोखरा आऊ जाऊ गरिरहेको मलाई पछिल्लो भदौको पहिलो हप्ताको पोखरा भ्रमणले केही झस्कायो । पोखरा भ्रमणका क्रममा आफूले देखेका र प्रत्यक्ष्ँ भोगेका अनुभवहरु सचित्र वर्णन गर्ने जमर्को गरेको छु । फेवाताल लगायतका ताल तलैयाहरु माथी मानविय उत्तरदायित्व पटक्कै छैन । तल प्रस्तुत गरिएका यी दुई फोटाहरु जुन म आफैले भ्रमणको समयमा कैद गरेको हो, यि आफै बोल्दछन् । १) फेवातालमा ढल मिसाइएको चित्र २ जलकुम्भीले ढाकेको फेवाताल फेवाताल पोखराको आ“खा हो जसमा पर्यटकहरुले माछापुच्छ«े तैरिएको हेर्न अर्को विश्वबाट यहा“ आउछन् कि यसले माछापुच्छ«को रिफ्लेक्सन आउ“दा दिनहरुमा फेवातालमा देखिन गाह्रो छ । साथै दृश्यमा देखिएका जलकुम्भी र अन्य झारपातले डुङ्गा नै पार गर्न नसक्ने अवस्थामा छ । अव यसलाई के भन्ने ? नेपाली उखान माल पाएर चाल नपाए जस्तै हो यो । हामी घरका ढल फोहर खुलेआम तालमा फ्याक्छौ, ताल तलैया सरसफाइमा हामी अनिच्छुक छौं । यो प्रकृति माथिको ठूलो अपराध हो । सके सफा गरौं नसके फोहर त नगरौं । आज काठमाडौको छातीमा बग्ने नदीहरु वाग्मती, विष्णुमति हाम्रो सभ्यताको बेइजेत गर्दै बगेका छन् किनकी हामी काठमाडौंबासीले उनीहरुलाई पो कहा“ इज्जत दियौं र ? फेवाताल लगायतका ताल तलैया र जलासय क्षेत्र जो पोखरामा छन् उनीहरुको स्थिति काठमाडौमा बग्ने विष्णुमती, बाग्मतीको जस्तो हुनबाट बेलैमा रोक्नुपर्दछ । बा“स रहे बा“सुरी रहने न हो । प्रकृति नै नरहे यहा“ पर्यटक रहलान् र ? पर्यटक त अर्को पाटो हो आर्थिक फाइदाको सर्वप्रथम त जो हामी यी खोला, नाला, तालका जन्म र मृत्युका साक्षी हो, सो नै यस बाट उत्पन्न हुने समस्याका भागिदार हौं । अब विलम्ब नगरी जलवायु सफा राख्न नेपाल सरकारले कडा कानुन बनाउन आवश्यक छ । हामी नेपालीहरुमा वातावरण सम्बन्धी चेतना दिन प्रतिदिन बढ्दो छ । हाम्रा प्रधानमन्त्री र मुख्य सचिवहरु वाग्मतीमा पसेर सफा गरेका कयौं पछिल्ला उदाहरण छन् तर सेलिब्रेटी शैलीमा खोलामा पस्नुले पनि राम्रै सन्देश त दिन्छ तर अझ नीति नियममा कडाइ र सो को प्रभावकारी कार्यान्वयन अझ ठूलो पक्ष हो । पोखरामा हालै भइरहेको बढ्दो सहरीकरण अर्को समस्याको रुपमा देखिरहेको छ । सहर र आसपासका डा“डाकाडामा घर निर्माण व्यापक मनोमानी छ । भौगोलिक हिसावले कमजोर भूअवस्था रहेको पोखरामा मापदण्ड विपरितका थुप्रै घरहरु छन् । थोरै जग्गामा अग्ला घरहरु निर्माण गर्ने र छिटो आर्थिक लाभ लिने नराम्रो रोगले पोखरा सिकार भएको छ । भ्रमणको क्रममा देखिएको लेकसाइडको एक वस्ती यसको उदाहरण हो । यस्तै तालको छेउछाउ र डा“डाकाडामा पर्यटकीय होटलहरु जे बनिरहेका छन् तिनको उचित अनुगमन गर्न आवश्यक छ । जथाभावी व्यक्तिको मुड अनुसारका घर होटल बनाउन दिदा त्यसले पोखराको प्राकृतिक सुन्दरतामा असर त पार्छ नै । अझ भौगोलिक हिसाबले कमजोर भूअवस्था भएको ठाउ“ जहा“ सेतीले वर्षेनी कटान गरेको र दिनानुदिन जमिन भासिएको समाचार आउछ, यस्ता ठाउमा भूकम्प जस्ता प्राकृतिक प्रकोपले अझ ठूलो नोक्सान ल्याउन सक्दछ । पोखरा जस्ता ठाउहरुलाई फरक व्यवस्थापनको जरुरत छ । सबै किसिमका आवास निर्माण र बोट विरुवाको उल्लेख्य रोपण, फराकिला सडक, बहुभाषिक साइनबोर्ड, सुरक्षाको प्रत्याभूति, सरल यातायात आदिले यसलाई विश्वको ग्रेट ग्रिनसिटी, इकोसिटी बनाउन सक्दछ । केवल हामीमा इच्छाशक्ति र अनुसासन हुनपर्दछ । पोखरा र पटके कर पोखराको पर्यायवाची शब्द जस्तै हुन् । लेकसाइडबाट पामे जाने बाटोमा एक युवकले म चढेको गाडीमा जतिचोटी सो बाटो गाडी गुड्यो उतिचोटी शुल्क असुले । एकचोटी तिरेको रसिदले एक दिनलाई पनि हुदो रहेनछ । ५–५ मिनेटको अन्तरमा ओहोर दोहोर गर्दा किन नहोस प्रत्येक चोटी आउ जाउ गर्दा तिर्नुपर्ने रहेछ । कुनै अफिस छैन, न साइनबोर्ड छ, एक युवक कानमा मुन्द्रा लगाएर बाटोको कुनामा बसेका छन् पैसा असुलेका अन्य बाटाहरु विश्व शान्ति स्तुपाको आसपास लगायत मुल सडकबाट १–२ कि.मी. भित्र छिर्दा त्यस्ता पटके कर असुल्ने युवाहरुको ठूलो जमात नै रहेछ । एउटै सहरका गल्लीहरुमा गुड्दा पटक पटक शुल्क बुझाउदै हिड्दा समय र धनको ठूलो लुट भएको जस्तो लाग्यो । बुढी मरी भन्दा पनि काल पल्क्यो भन्ने डर जस्तै कुरा पटके करमा पैसा तिर्नु पर्दाको पिडा मात्रै छन् । यसले समाजका युवाहरुलाई मेहनत गरी पैसा कमाउनको साटो बाटो ढुकेर पैसा असुल्न प्रोत्साहन गरेको छ । नत्र २–४ कि.मी. वरीपरी गल्ली पिच्छे शुल्क असुल्नको औचित्य के त ? स्थानीयलाई अनावश्यक रुपमा शक्तिशाली बनाउनु हुदैन । यस्ता खाले प्रवृत्तिहरु हाल नेपालमा बढ्ता छ जस्तै पोखराबाट नजिकैको घोरेपानी जो पुनहिल ट्रेक्किंग को ढोका हो ,यहा“ बाह्य लगानीकर्ता गएर आफ्नो अनुसार आर्थिक शक्ति लगानी गर्ने वातावरण छैन । स्थानीयको कब्जामा हाम्रा पर्यटकीय रुटहरु कैदी भएका छन् । स्थानीयले स्तरीय वासस्थान र खानपिनको व्यवस्था गर्न नसकेको स्थिति छ र गर्न सक्नेलाई जान दिने वातावरण छैन । पुरै सिन्डिकेट र दादागिरी छ । नेपाल पर्यटन बोर्ड र अन्नपूर्ण संरक्षण क्षेत्रको छुट्टाछुट्टै पदयात्रा अनुमति पत्र लिएर पुनहिल पुग्दा जम्मा ३–४ दिनको भ्रमणमा फेरी पुनहिलमा स्थानीयको अर्को परमिट नलिइ सुखै छैन । जुन लिएर मात्र पुनहिलको डाडोमा प्रवेश पाइन्छ । यसलाई के भन्ने ? दोहोरो सत्ता वा अराजकता ? पोखरामा सुरु हुने पटके कर, विभिन्न रुपमा म्याग्दीको पुनहिल हुदै जोमसोमको लोमाङथाङ सम्म पुगेको छ । पोखरामा ट्याक्सीहरु मिटरमा हिड्नु भनेको घाम पश्चिमबाट उदाउनु जस्तै हो । ताकी यो असम्भव जस्तै छ । जसले गर्दा स्वदेशी र विदेशी यात्रुहरु पोखरामा गुड्ने ट्याक्सीबाट दिनदहाडै ठगिन्छन् । अध्यारोमा ढुङ्गा हाने जसरी हाउ मचमा यात्रुहरुलाई हिड्न किन वाध्य पारिदैछ ? कास्की जिल्ला प्रशासन र ट्राफिक कार्यालयले ढिला नगरी यो उत्तर दिनुपर्दछ । समस्या अरु धेरै छन् र राम्रा कुराहरु पनि धेरै छन् र होलान् पनि तर यात्राको सिलसिलामा सरसर्ती देखेका र भोगेका यी मेरा अनुभव र भोगाई पोखरालाई निरोगी सहर सफा सहर, नियम र कानुनले बास गरेको सहर बनाउ भन्ने हो । काठमाडौं जस्तै अव्यवस्थित सहरको सिको पोखराले नगरोस् । विश्वलाई लोभ्याउने स्वर्गको टुक्रा जस्तो पोखरा हामीले भोलिको पुस्ता र त्यहा“ घुम्न जाने पर्यटकको उत्तिकै सुन्दर र सुरक्षित राख्न सकौ भन्ने हो ।
न्यूयोर्कमा पाउना बन्दा
Mar 3, 2016	2 Comments
सिराक्युसबाट न्यूयोर्क सिटी जाने अघिल्लो दिन न्यूयोर्कमा रहदा बस्ने ठाउ“को टुङ्गो लगाउन सोच्न थालें । साथी आनन्दको याद आयो, जो त्यहा“ सवैभन्दा नजिकको मनले खाम्यो । एस.एम.एस. गरिहालें आनन्द सर भोली म न्यूयोर्क सिटी जादै छु । राती कामबाट ढिला फर्कने साथीले भोलिपल्ट विहानै रिप्लाई गरे – वेलकम टु न्यूयोर्क सिटी सर । ज्याक्सन हाइट तिर आएर टाइम पास गर्दै गर्नुस, म डिउटी सक्नासाथ ८–९ बजे त्यहा“ आउ“छु अनि कोठामा संगै जाउ“ला । मैले हुन्छ भने । सिराक्यूसमा त्यो विहान बाक्लो हिउ“ परेर बाटो र घरछेउ पार्किङ्ग गरेका कारहरु सेताम्मे भएका थिए । तापक्रम –१४ मा पुगेको थियो । ग्रे–हाउण्ड बसमा चलेको हिटरले पनि यात्रुलाई पुग्ने गरी तातो दिन सकेको थिएन, म लगायत सबै यात्रु वसभित्र काप्दै थियौं भने बस बाक्लो हिउ“मा सावधानी पूर्वक विस्तारै गुडिरहेको थियो । बाटोमा आनन्दको अर्को एस.एम.एस आयो, ओ, नवराज जी, हामी विद्यार्थी झै बसेका छौं, सिरक र डस्नाको अभाव छ, तपाईलाई असुविधा होलाकि राती के गर्ने होला ? मैले रिप्लाई गरे – म होटल बुक गर्छु, नि त । ज्याक्सन हाइट तिर भेटेर संगै खाना खाउला गफ गरौला भैगो नि त † यस पटक मैले पनि स्लिपिङ्ग ब्याग ल्याइन, हुन्न ? आनन्दले जवाफ फर्काए – स्लिपिङ्ग व्यागमा सुत्ने भए ज्याक्सन हाइटमा आएर स्पोर्ट अथोरिटीमा किन्नोस्नत । त्यहा“ अलि राम्रो सामान पाउ“छ । बस्न त संगै बसौं है ? मैले ओके सर डन भन्दिए, च्याप्टर क्लोज भएको ठानेर । नेपाली साथीहरु संग बस्दा खानपिन, बसाई सवै मिल्ने ठानेर मैले सानो घन्चमन्च किन नसहने भनी आफैलाई प्रश्न गरें र त्यही अनुसार माइन्ड मेकअप गरें । वादलमा जहाज पसे जसरी बस लिङकन टनेलमा पस्यो अनि पोर्ट अथ्योरिटी टर्मिनलमा यात्रुलाई झा¥यो, आफ्नो सुटकेस तानेर ज्याक्सन हाइट जाने व्लु लाइन मध्येको ई लिएर ज्याक्सन हाइटमा पुगे र त्यहाँ रहेको नेपाली रेष्टुरेन्ट चौतारीमा खाना खाए“ अनि नजिकैका अरु हिमालयन याक, थकाली किचेन, फ्रेन्डस कर्नर, आदि रेष्टुरेन्टहरु रहेका गल्लिमा हिडें, नेपाली खाना लाई मुल परिकारका रुपमा विश्व भरिका मान्छेलाई बेचेका छन् यी ज्याक्सन हाइटका रेष्टुरेन्टहरुले । यो नेपाल प्रचार गर्ने एउटा थलो बनेको छ । अमेरिकामा रहेका थुप्रै नेपाली गायकहरु त्यहा“ रहेका नेपाली सम्म आफ्नो कला व्यक्त गर्ने माध्यमका रुपमा यिनै रेष्टुरेन्ट मन्च बनेका छन् । साथीलाई कुर्न पर्ने अरु ३–४ घण्टा थियो । नजिकै रहेको स्र्कपीयो नामको मेक्सिकन वार मा छिरें, बाहिर चिसो स्याठले कतै न कतै नछिरी सुखै दिएन । बेलुका भनेको समयमा साथी कामबाट फर्किए । डेरामा पुगियो । दुःख सुख सतियो । भोलिपल्ट पनि साथीको मै वित्यो अर्को रात । पर्सिपल्टको कुरा हो । साथी काम बाट फर्कन अर्की ३ घण्टा जति बाकी थियो । म किचेनमा चिया पिएर एक्लै बसिरहेको थिए“ दिनभरिको म्यानहाट्टन तिर डुलेर थाकेकोले । वर्ष ४५ जतिकी एक जना मङ्गोलियन अनुहार भएकी तर औषत उचाइ अलि बढी भएकी महिला देखा परिन । म तिर केही शंकाका आ“खाले हेरेपछि प्रश्न गरिन । हु आर यु ? आइ एम फ्रेण्ड अफ आनन्द । उनले अमिलो अनुहार बनाएर अर्को प्रश्न गरिन् । हु गेभ यु दिस किई टु इन्टर दिस हाउस ? मैले साथी आनन्दसंग आफु २ रात देखि यहा“ बस्दै आएको र ऊ आफ्नो साथी भएको र उसैले यस कोठाको चावी दिएको बताए । मेरो सोझो कुराले उन्को भर्खरै टुसा पलाउन लागेको रिसको विरुवा ह्वात्तै बढ्यो । उनले आफ्ना कुरा दवाव र धम्कीको भाषामा राख्न थालिन – यो कोठा मैले आनन्द र उस्को साथी गोकुल लाई दिएको छु, उनीहरु बाहेक कसैलाई यस कोठाको चावि लिन अधिकार छैन र मलाई जानकारी नगराई उनीहरु बाहेक अरु यहा“ बस्दा यो नियमको उल्लंघन हुन्छ । पाउना बस्नको लागि सहरमा होटलको व्यवस्था छ, यो ठाउ“ पाउनाघर होइन आदि, भन्दै उनी झन चर्की कुरा गर्न थालिन् । यति सम्म भनिन् कि – मिस्टर आई डोन्ट नो यु, हु नोज यु माइट वि थिफ ? आई क्यान राइट नाउ, कल पुलिस एण्ड गिभ यु टु देम । आई हाएभ द्याट राईट । अब अति नै भयो, उन्ले साथीको मा पाउनाको रुपमा बसेको मेरो बसाइलाई सानो तिनो अपराध नै गरे जसरी व्याख्या गर्न लागिन । तथानाम बोलिन, अब के गर्ने ? मैले भनें म यहा“ साथीको मा अन्तिम रात विताउदै छु । तर पनि म यहा“ रहेर उन्को सान्ती हराम हुन्छ भने अहिले नै होटल बुक गरेर त्यस घर छाडीदिइ उन्लाई सहयोग गर्ने कुरा सुनाए“ । उन्ले सोधिन, भोलि कहा“ जाने ? मैले भने, वासिङटन डि.सी. के छ प्रमाण ? मैले मोवाइलमा रहेको मेगा वसको टिकट देखाइदिए“ । आनन्दको साथी हो या होइन भनेर आनन्दको फोन नम्बर बताउन भनिन् । मैले आनन्द भनेर मोवाइलमा सेभ गरेको नम्बर देखाइदिए“ । अब म आनन्दको साथी भएको र भोलि उक्त घर छाड्ने पक्का प्रमाण देखेपछि होटल बुक गर्न ल्यापटप खोल्न लागेको मलाई उन्ले आजको एक रात यहा“ बस्न सक्छौ भनिन् । यतिखेर आइपुग्दा उनीमा थोरै मात्रामा रिसको पारो घटेको अनुहारमा देखिन्थ्यो । उनी तातिरहदा पनि म सेलाईनै रहेको देखेर उनी अलिकति लाज मानेको जस्तो देखिन्थिन् । अनुहारमा थोरै प्रायश्चितको झलक पनि आइसकेको थियो । उन्ले १ रात बस्न सक्ने औपचारिक तालको बाडी छाडिन । यो बाडीमा उन्को उदार आकस जत्रो छाती भएको उन्को हाउभाउले नाटक गरेको भए पनि त्यो सा“चो थिएन । यो उन्को मुटु माथी ढुङ्गा राखि गरिएको निर्णय थियो । उन्लाई एक त उक्त घरमा म पाउना बनेर बसेको मन परेको थिएन भने अर्को साथीले उन्लाई बेलैमा पाउना पालेको सुचना नपठाएको कुराले पनि रिस जगाइरहेको थियो । उन्ले पाउना बसेको भन्दा पाउना बसाउनेले बेलैमा घरधनी संग एप्रोभल नलिएको कुरा तिर जोड दिन थालिन र म तिर केही नरम र उदार बनेको देखाउन थालिन । केही पहिले डेरावालले साथी ल्याउदा ट्वाइलेटमा ब्रस खसाएको, वाथटपमा धेरै पानी खर्च गरेको आदि कुराहरुले उन्लाई घाटा पु¥याएको कुराहरु सुनाउन थालिन । यी सबै भन्नुको औचित्य नया“ मान्छेहरु आउदा उनीहरुलाई घरका नियमहरु थाहा हुदैन र त्यसैले सम्पत्तिमा नै असर पु¥याउछ भन्नु थियो । मैले थोरै सहमतिको टाउको हल्लाइदिए“ । एकै छिन अघि अमानवीय ढङ्गले मलाई पुलिसमा सुम्पने सम्मको धाक लगाएकी यी महिला हल्का नरम बन्दै गइन, साथीको डेरामा २–३ रात बस्न आउदा पुलिसनै बोलाए पनि मेरो मानवअधिकारको अघि उन्को पुलिस प्रशासनले के जवाफ दिन्थ्यो त्यो अवश्य रोचक क्षण हुन्थ्यो होला । तर शान्त रह,ें कम बोलें, बढी बोलेर जित्न खोज्दा उन्लाई अझ बढी रिस उठ्न सक्थ्यो र परिस्थिति झन विग्रन सक्थ्यो । यस्को असर साथी आनन्दलाई पनि पर्न सक्थ्यो । हरेक ठाउमा आ–आफ्ना नियम र जिवनशैली हुन्छन । नाटकीय ढङ्गले परिस्थिति सौहाद्रपूर्ण बन्यो, विदेशी भुमिमा सा“झमा भेट भएकी एक महिला संग के शत्रुता पाल्नु र ? अब उनी घर निरीक्षण गरी बाहिर निस्किन् । व्यापारको रुपमा घर एकमुष्ठ भाडामा लिने र खुद्रामा कोठाहरु बेच्ने यी चिनिया महिलाकोे काम थियो । यो उन्ले सुरुमै मलाई हु आर यु भनेपछि मैले सोधेको उस्तै प्रश्नमा उन्ले ओनर अफ द हाउस भनेकी थिइन् । र सम्प्रभुता आफुमा निहित रहेको कुराको प्रमाण पनि देखाएकी थिइन् । मैले उन्लाई चिया अफर गरे, उनीले नो थ्याक्स, सेफ ट्रिप टु डि.सी. भन्दै घरबाट निस्किन मैले भर्खरै १ हप्ता काटेको २०१६ उन्को शान्त र उन्नत बनोस भन्दिए । पछि साथी आनन्द डेरामा आएपछि सडक नाटक झै अचानक आफूमाथि आइलागेको यो साझको घटना एक एक गरि बताए । साथीले मैले उक्त महिलालाई सौहाद्रपूर्ण व्यवहार गरी पठाएकोमा खुशी भए । उन्ले केही पहिले अर्को उन्कै छेउको डेरावालले कोठामा साथी ल्याउदा ति महिलाले विवाद बढ्दै गर्दा प्रहरी नै बोलाएको अनि घटनाले ठूलो रुप लिएको कुरा खोले । नेपाल देखि साथी भाई अमेरिका आउदा २–३ रात बास बस्न आफ्नोमा बोलाउनु साथी आनन्दको रहर र वाध्यता कुनै एक वा दुवै थियो होला ताकि उन्ले घरधनी संग पाउना पोलिसीमा के सम्झौता गरेका थिए, म यसमा अनविज्ञनै रहन चाहें । अनि पाउना प्रति घर÷कोठा भाडामा लगाउने एजेन्टहरु यति सम्म तल गिरेर व्यवहार गर्छन भन्ने मलाई कहिल्यै भान भएन । अतिथि देवो भवः भन्ने सस्कारमा हुर्किएको मलाई सबै भुगोलमा पाउना हाइहाई नभए पनि यति सम्म दुव्र्यवहार खेप्नुपर्ला भन्ने लाग्दैनथ्यो । त्यो साझले मलाई भिन्न सस्कृति र भुगोलमा यात्रा गर्दा पाउना बन्ने वा नबने कुराको छिनोफानो बेलैमा गर्न अब आउदा दिनहरुमा सहयोग पु¥याउने पक्का कोशेढुङ्गा बन्यो । न्युओर्क जस्ता अति महङ्गा र अरु सहरहरुमा यात्रा गर्दा पाउना बनेर साथी स्वयम र आफुलाई समस्यामा पार्नु भन्दा बरु आफ्नो वालेटका साइज अनुसारको होस्टेल, होटेल, गेस्टहाउस आदि को स्वव्यवस्था गर्न मलाई त्यो साझले झन उत्प्रेरित ग¥यो । अविस्मरणीय त्यो साझ एउटा सिकाइको समय बन्यो । ति महिलाले मलाई घरबाट निकालिनन् न त पुलिसनै बोलाईन तर चाहेको भए उन्ले त्यो नगर्न पनि सक्थिनन् । उन्ले जितेको र आफुले हारेको निसाफ गरें । हाम्रो समाजले सामान्य ठानेका कति कृयाकलापहरु अरु समाजमा असामान्य हुन्छन् अरु समाजले असामान्य ठानेका कति कृयाकलापहरु हाम्रो समाजमा सामान्य हुन्छन् । विश्व एउटै घर हो तर पनि अनगिन्ती समाजिक नीति नियम, शैली, सस्कारले यो चल्दै आएको छ । आफ्नो संस्कृति र सामाजिक अभ्यास मात्र उपल्लो ठान्नु भन्दा ठाउ अनुसारको भेषमा चलेको राम्रो होला ।
हिलारी देखि रब हल सम्म
Oct 7, 2015	1 Comments
मे २९ सन १९५३ का दिन तेन्जिङ्ग नोर्गे शेर्पा र न्यूजिल्याण्डका महुरी व्यवसायी एडमन्ड हिलारीले संगै संसारको अग्लो हिमालको चुचुरोमा पाइला राखेका थिए । एभरेष्ट, चोमोलङवा वा सगरमाथा अंग्रेजी, तिब्बती र नेपाली भाषामा जे नामले चिनिए पनि विश्वले यसलाई तेस्रो धु्रव मान्दथ्यो । तेन्जिङ्गले संयुक्त राष्ट्रसंघ, नेपाल, भारत र वेलायतको झण्डा यो चुच्चोमा फरफराएका थिए भने हिलारीले यो विश्व इतिहासको तस्विर खिचेका थिए । तर खिचिएका तस्विरमा उनको तस्विर थिएनन् जसले अरु सर्वसाधारणलाई हिलारी सामु प्रश्न राख्न वाध्य पारिदियो । किन हिलारी स्वयमको तस्विर शिखरमा खिचिएन ? के उनी सगरमाथाको टुप्पोमा पुगेनन् त ? उनले यस्ता प्रश्न माथि यति कुरा भने कि तेन्जिङ्ग फोटोग्राफर होइन र सगरमाथाको शिखर तेन्जिङ्गलाई फोटो कला सिकाउने ठाउ“ पनि होइन । हिलारीले नेशनल जोग्राफिको जुलाई सन् १९५४ को अंकमा भनेका छन् जब उनी सगरमाथाको टुप्पोमा पुगे उनले अझै कतै चढ्न बाकी ठाउ छ कि भनि नियाल्न पुगे । अनि कतै त्यो भन्दा उचो भूभाग देखेनन् किनकी उनी र शेर्पा तेन्जिङ्ग जहा“ पुग्नुपर्ने हो त्यहा पुगिसकेका थिए । अब चढ्न बाकी केही थिएन । हिलारी र तेन्जिङ्ग भन्दा २९ वर्ष पहिले आरोहीद्धय म्यालोरी र इर्भाइन तिब्बती भूमिबाट सगरमाथा चढ्दा उनीहरु २८ हजार फिट पुगेको तथ्य त जिवितै थियो तर उनीहरुले सगरमाथा चढे वा चढ्न सकेनन् त्यो सत्य आउन सकेको छैन र थिएन । तर एडमन्ड हिलारीले शिखरमा उनीहरुको केही पनि चिनो भेट्टाउन सकेनन् जसको कारण उनीहरुले शिखर चुमेनन् भन्ने अडकल काटियो र हिलारी जो व्रिटिस आरोहण दलको सदस्यको रुपमा चढेकोले उनकै समुह पहिलो शिखर चुम्न सफल समुह बन्यो । संयोगवस १९५३ जुन २ का दिन बेलायतमा रानी एलिजावेथ दितियको राज्यभिषेक थियो । हिलारीको आरोहणको दुःख, सुख बनेर बेलायतको त्यो महत्वपूर्ण दिनमा विश्वभर रेडियोमा गुन्जिरहेको थियो । हिलारीले पनि त्यो खबर सगरमाथाको बेश क्याम्प तिरै औपचारिक रुपमा सुने । अनि उनी भन्छन् ः तब मात्र म विश्वस्त भए“ । औपचारिक घोषणा उनको कानमा नपरिन्जेल उनी र तेन्जिङ्ग आफैलाई थाहा थिएन की उनीहरुले सगरमाथा चढे वा चढेनन् । नेशनल जोग्राफीको जुलाई १९५४ को अंकमा उनको आरोहण दिनको छोटो अनुभव यस्तो छ ः मैले अक्सिजन बन्द गरेर माक्स हटाउदा २९ हजार फिटको उचाइको दुब्लो हावामा मेरो श्वास प्रश्वास अलिक बढ्यो तर त्यति ज्यादा असुविधा नहुने गरी । मैले ओभानो आफ्नो सर्टको भित्रपट्टि जतन गरी राखेको क्यामेरा बाहिर झिके जुन आखाले देखेभरीका तलका लहरै हिमालहरुको तस्बिर खिच्न आवश्यक थियो यदि हामीले हामी टुप्पोमा पुगेको स–प्रमाण दिनु छ भने । मैले तेन्जिङ्गको हिउ काट्ने बन्चरोमा झुण्ड्याइएका संयुक्त राष्ट्रसंघ, बेलायत, नेपाल र इन्डियाको झण्डा लिएको तेन्जिङ्गको फोटो लिए । तेन्जिङ्गले मेरो फोटो पनि खिच्दो हो त कस्तो राम्रो हुदो हो । ऊ सद्गुणहरुले भरिएको शेर्पा हो तर पनि उ फोटोकला जान्दैन र मलाई लाग्छ सगरमाथाको टुप्पो उसलाई यो कक्षा संचालन गर्ने उत्तम ठाउ होइन । हामीले म्यालोरी र इर्भाइन यहा हामी अघि आइपुगेको कुनै संकेत भेटेनौं । त्यहा केही पनि संकेत छैन यद्धपि मैले उनीहरु लगायत अन्य कैंयौं पर्वतारोहीहरुले प्रयोगमा ल्याएको नर्थकोल र नर्थइष्टरिजतिर आफ्नो नजर पु¥याए, अनि मैले क्यामेरा आशा गरौं कसैले नचढेको मकालु अनि टाढा आकाशमा कन्चनजंघा र चोयु तिर मोडे जुन ताराहरुझैं चम्किरहेका थिए यत्रतत्र । हिउमा खोस्रिएर तेन्जिङ्गले सानो खाल्डो बनायो र भगवानलाई केही उपहारहरु चढायो । जुन बौद्ध धर्मालम्बीहरुले यो उचाइमा बास गर्छन् भन्ने विश्वास राख्छन् । सानो एउटा निलो सिसाकलम जो उसको छोरीले दिएकी थिई र केही मिठाई र विस्कुट । मैले यो उपहारको नजिकै जिजस अंकित क्रस राखे जुन साउथकोलमा साथीसंग पाएको भन्दै जोन हन्टले मलाई सुम्पिएका थिए । तल झर्ने समय अब भयो भन्ने ठानेर मेरो अक्सिजन माक्स फेरी मुखमा जोडे र आफैलाई धन्य ठान्दै अक्सिजन चुस्दै तल झर्नुपरेकोमा कत्ति पनि तितो नराखी झर्न लागें । हाम्रो दुवैको हाउभाउले जनाउथ्योकी हामी दुवै थकित थियौं । हिलारी र तेन्जिङ्गको पहिलो सफल आरोहण पछि अब सगरमाथामा अरु थुप्रैका आखा पर्न थाल्यो । पहिलो महिलाको रुपमा जुनको तवाई (जापानी नागरिक) अनि विना अक्सिजन बोटल रेनोल्ड मेस्नर (जर्मन नागरिक) हुदै सगरमाथामा दुवै आखाको ज्योति गुमाएका पर्वतारोही एरिक सम्म पुगे । शेर्पाहरुको आफ्नै इतिहास र सम्बन्ध छ सगरमाथा संग । २१ पटक आरोहण गरेका आप्पा शेर्पा या छोटो समयमै पुग्ने पेम्बा दोर्जे अनि १६ वर्षे तेम्बाछिरी । सगरमाथा रेकर्ड राख्ने थलो मात्र बनेन यो धनीहरुको लागि सोखको केन्द्र पनि बन्यो । एडमन्ड हिलारीले आफ्नो जिवनकालभरि सगरमाथाको व्यवसायिक अर्थात नाफा आर्जन गर्ने हेतुले आरोहण संचालन गर्न नहुने भनेर अडान त राखे तर सगरमाथा कसैले रोक्न नसक्ने गरी व्यवसायिक आरोहणमा फस्यो । नेपालका तात्कालिन सरकारहरुले सगरमाथालाई आय आर्जनको गतिलो भाडो बनाए । महंगो परमिट र महिनौको समय र सामथ्र्यको जोड घटाउले प्रत्येक आरोही सगरमाथा चढ्न जो वेशक्याम्प पुग्छन्, सवै सगरमाथाको चुचुरोमा पुग्नपर्छ भन्ने सो भ्रम आरोहीहरुमा बन्न पुग्यो । त्यसैले रेकर्डले यो देखाउछ कि प्रत्येक ४ आरोहीमा १ जनाको सगरमाथा आरोहणमा ज्यान जाने गरेको छ । सगरमाथा लगायत अन्नपूर्ण, धौलागिरी र अरु थुप्रै हिमालहरुको आरोहणको कथाहरु निकै मार्मिक छन् । त्यो मध्ये सन् १९९६ साल पनि सगरमाथा आरोहणको इतिहासमा एउटा असामान्य वर्षको रुपमा दर्जित छ । रब हल र स्कर्ट फिस्चर न्युजिल्याण्ड र अमेरिकी नागरिक जो संसारभरिका साहसिक आरोहीहरुलाई आफ्नो कम्पनी एडभेन्चर कन्सल्ट्यान्ट र माउन्टेन म्याडनेस मार्फत सगरमाथा चढाउने काममा लागेका हुन्छन्, जुन उनीहरुको व्यावसाय हो । तर अफसोच, मे १०, १९९६ का दिन उनीहरु दुवैको सगरमाथा आरोहणका क्रममा दुःखद मृत्यु हुन्छ । यी निकै अनुभवि दख्खल र आफै पर्यटकहरुलाई सगरमाथा आरोहण प्याकेज बेच्ने आटिला नेतृत्वकर्ताको सगरमाथामा भएको विलय जसलाई जोन क्राकाउरले इन्टु द थिन इयर मार्फत बाहिर ल्याएका हुन् । जोन क्राउकर स्वयमले आफ्नो पुस्तकको क्लाइमेक्स र अन्त्य यो हुन्छ भनेर कल्पना गरेका थिएनन् होला सायद जहा“ आफु स्वयम पात्र र लेखक बनेर सहयात्रीको मृत्यु पुस्तकमा लेख्नुपर्ने वाध्यता उनलाई आओस्, अर्नेस्ट हेमिङ्गवेयको फेयर वेल टु आम्स झै । हिजो सम्म वेश क्याम्पमा जसले मृत्युबाट वच्न आरोहणका सुत्रहरु सिकाउथ्यो उसैलाई गुमाउनु पर्दाको समिक्षामा कयौं पाना खर्च गर्न वाध्य पार्यो जोन क्राउकर लाइ यस पुस्तक ले। रब हल जो बाच्न सक्थे तर आफ्नो आरोहण दलका सदस्यको सुरक्षालाई आफ्नो भन्दा माथी राख्दा उनको त्यो आरोहण नै अन्तिम बन्यो । इन टु द थिन इयर रब हल र स्कट फिस्चरको कर्तव्य र त्याग मिसिएको महत्वपूर्ण आरोहणको कथा हो जसलाई जोन क्राउकरको शक्तिशाली कलमले विश्वभरी पु¥यायो । अरुलाई टेकेर आफु माथी जाने मात्र होइनकी मौकामा अरुलाई आफुमा टेकाएर माथी पु¥याउनु पर्छ भन्ने त्यागको कथा हो । यसै पुस्तकको सत्यकथा माथी बनेको पछिल्लो अमेरिकी फिल्म एभरेष्ट १ हप्ता अघि राजधानीको सिभिल मलमा हेर्दै गर्दा जब रब हलले २९ हजार फिटको केही तलबाट उसको वेश क्याम्प सहयोगी हेलेन मार्फत स्याटल्याइट फोनमा उसको घरमा रहेकी श्रीमती लाई फोन गर्दै गर्दा थ्रिडी फिल्ममा लगाइने पातलो कालो चस्मा भित्रबाट धेरै दर्शकहरुले आशु झार्दै सुक्क सुक्क गर्दै थिए । रब हल आफ्नो टिमका आरोहीहरुको सुरक्षाको लागि आफै हिउ आधीको शिकार बन्दै थिए । जिवन र मृत्युको मध्य भागबाट अझ पर पुगेर मृत्युको नजिक पुग्दै थिए रब हल । अनि यही समय उनको अन्तिम सम्पर्क हुदै थियो श्रीमती संग टेलिफोनमा । मृत्युको मुखैमा पुगेको परिवारको सदस्यले उसको जहानलाई व्यक्त गरेको माया र अन्तिम विदाई, अनि आफ्ना सहयोगी र साथीहरु गुमाएर बेचैन फर्किएका लेखक जोन क्राउकर अनि हात र खुट्टा गुमाएर फर्किएका अरु आरोही, जिवनमा मृत्युसंगको संघर्ष र जिवनप्रतिको लोभ, मोह अनि नचढेर पनि हुने तर नचढी नहुने त्यो कठोर सगरमाथाको पहाड सबै इन टु द थिन इयर भित्रका रहस्यहरु हुन् जसलाई एभरेष्टमा उतारिएको छ । प्रकृतिसंग बाहुवलिहरु हारेको एक दिन हो मे १०, १९९६ । तर यी हार र जितको कथाले हिमाल चढ्ने, चढाउने र बेच्ने सबै सरोकारवाला हरुलाई एउटा पाठ अवश्य सिकाएको छ । एउटा देशले राजश्वको लागि हिमाल बेच्छ जस्तै नेपाल, शेर्पा नुनको लागि हिमालमा बेचिन्छन् अनि सबै कुरा किन्न सकेपनि एउटा आरोहीले नया जिवन किन्न सक्दैन भने हिमाल बेच्नुको औचित्य के त ? हिमाल कहिले सम्म बेचिरहने ? सगरमाथामा वर्षौ भइरहेका अनुत्तरित मृत्युका उत्तरहरु स्वयम स्वर्गीय एडमन्ड हिलारीलाई पनि के थाहा होला र ? हिमालहरुको बढ्दो व्यवसायीकरणले यो देखाउछ कि आरोहीहरु सगरमाथा चढ्दै छन् वा उनीहरुको इगो ? यस्तै प्रश्नहरुको उत्तर स्वयम आरोहीहरुलाई नै थाहा होला ।
Pages9: You are at page 1 of 9